Kooxda Chelsea Oo Dhamaystirtay Saxiixii Sedexaad Ee Tababare Antonio Conte – idalenews.com
Kooxda Chelsea ayaa isku raacday heshiis ah inay dhameystirto saxiixa goolhayaha da’da yare ee Marcin Bulka, sida ay ku dhawaaqday kooxda goolhayaha.
16-sano jirkaan goolhayaha ah ee uu ciyaara FCB Escola Varsovia – akadeemiyada rasmiga ah ee naadiga Barcelona ku leedahay dalka Poland – ayaa oo soo gaaray Stamford Bridge si uu u dhamaystiro hishiiskaan.
Waxaa la fahamsan yahay tababarayaasha Blues in ay la dhaceen adeegiisa ka hor xilli ciyaareedka 2016/17. da’da yarka aadka loo qiimeeyo ayaa la filayaa in uu ku biiro akadeemiyada kooxda Chelsea xilli ciyaareedka soo socda, halkaas oo uu ka dibna kasoo gali karo kooxda koowaad ee macalin Antonio Conte.
Bulka ayaa noqon doona saxiixii seddexaad ee xagaagan uu sameeyo tababare Conte ka dib markii tababaraha reer Talyaani uu keenay weeraryahanka Marseille Michy Batshuayi iyo xidiga qadka dhexe ee Leicester N’Golo Kante.
Goolhayihii hore ee Chelsea Henrique Hilario kaasoo u ciyaaray kooxda intii u dhaxeysay sanadaha 2006 iyo 2013 ayaa ah mid ka mid ah tababarayaasha ugu baaqay in kooxda in ay sameeyo heshiiska si uu ugu soo biiro kooxda safarka ku joogta US.
Qarax xooggan oo xalay gilgilay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan